Zava-baovao 5 no antenainay hananana | Bezzia
Maria vazquez | 05/08/2021 12:00 | kolontsaina
Ny editorial dia tsy miala sasatra ary na dia amin'ny fahavaratra aza dia manome antsika nify lava izy ireo vaovaom-baovao izay tonga na ho tonga ao amin'ny katalaoginy mandritra ny volana aogositra sy septambra. Nangoninay ny sasany tamin'izy ireo; dimy, manokana, antenainay ny hahazo ny tanantsika ary manampy ny lisitr'ireo zavatra tokony hatao fotsiny izany. Jereo miaraka aminay ireo zava-baovao literatiora dimy!
1 Ireo mpisandoka sakay
2 Ady amin'ny atitany
3 Ireo tendrombohitra taloha
4 Lavitra an'i egypta
Ireo mpisandoka sakay
Mpanoratra: Monika sznajderman
Daty famoahana: 23/06/2021
Nandritra ny am-polony taona maro, ny tantaram-pianakavian'ilay mpanoratra Monika Sznajderman dia voasarona zava-miafina. Ny rainy dia tsy te hitantara taminy ny zavatra niainany nandritra ny fotoana nitondran'ny Nazia an'i Polonina, ary tsy nitantara kely taminy momba ny sampan'ny raim-pianakaviana izy: raha ny Lacherts, ny fianakavian'ny tompon-tany katolika ambony ao Volinia izay niavian'ny reniny. tantara sy anekdote isan-karazany, momba ny Radoms, fianakaviana jiosy maotina niavian'ny rainy, dia tsy nisy fantany mihitsy.
Ny Pepper Counterfeiters dia nitantara ny fanadihadiana izay nataon'i Sznajderman avoty ny havany jiosy tsy ho adino: Amin'ny alàlan'ny taratasy, sary, boky ary arisiva ho an'ny besinimaro, dia hitany ny nanjo ny razany, izay ny fiarahamonina poloney nandritra ny Ady Lehibe Faharoa. Tantara tsy manam-paharoa izay manambatra ny fitantarana akaiky miaraka amina antontan-taratasy henjana hamongorana ny fahanginana manodidina ny iray amin'ireo vanim-potoana mampalahelo indrindra teo amin'ny tantaran'ny firenena.
Ady amin'ny atitany
Author: Joseph Zarate
Daty famoahana: 06/08/2021
Taorian'ny niverenany tany amin'ny fakany Ashaninka, Edwin Chota miady amin'ny fitrandrahana ala tsy ara-dalàna ao amin'ny vondrom-piarahamonina Amazon ao Saweto mandra-pahafatin'ny balan'ny mpivarotra hazo azy. Máxima Acuña, tantsaha sy mpiandry ondry avy amin'ny Andes of Cajamarca, dia misalasala ny handao izay heveriny ho fananany na eo aza ny tetikasa fitrandrahana any Conga, izay mitady hanangona volamena amin'ny fari-tany iray ihany. Osman Cuñachí, iraika ambin'ny folo taona, dia nandroaka diloilo tamin'ny sary iray izay nitety izao tontolo izao ary nitantara ny fandrobana nandoto ny vondrom-piarahamonina Nazareth sy ny renirano izay nilomano sy nanjonoan'ny Awajún.
Nosoratana tamin'ny hamafin'ny asa fanaovan-gazety sy ny famonoana an-gazety, ireo tantaran'i Joseph Zárate ireo - nahazo ny Loka Ortega y Gasset 2016 sy ny Loka Gabriel García Márquez 2018 - tsy izany ihany mikasa ny hanameloka ny ady ara-tsosialy, toekarena, politika ary tontolo iainana nipoaka tao afovoan'i peru. Izy ireo koa dia manazava ny ady manokana, ara-tsaina sy ara-pihetseham-po an'ny lehilahy sy ny vehivavy izay, noho ny toe-javatra samihafa, dia manapa-kevitra ny hiaro sy hitahiry ny taniny, ny fomba amam-panaony ary ny mombamomba azy ireo. Inona no azontsika atao - amin'ny isam-batan'olona, ​​amin'ny fiaraha-monina - amin'ny anaran'ny antsointsika hoe "fandrosoana"?
Ireo tendrombohitra taloha
Daty famoahana: 30/08/2021
Ny mpitantara ny The Old Mountains dia niverina tany an-tranon'ilay fianakaviana, tany Soria, taorian'ny fahafatesan'ny rainy. Any izy dia tsy maintsy mandray an-tanana ny tany izay, lavitra ny famaritana ny fotoana hafa, ankehitriny dia mitaky ny fikarakarana ny hazo, ny fanadiovana ny ala mikitroka, ny fiomanana amin'ny ady amin'ny afo. Amin'ny fijanonany misimisy ao amin'ity faritany ity miaraka amin'ny fetran'ny tsy fetezana, eo anelanelan'ny ambanivohitra sy ny tanàna kely amin'ny faritany dia hamariparitana ny "gadona tsy maharaka fa izy irery ihany." Saingy, koa, hampiharihary fahatsiarovan-tena mangina sy tsy misy dikany amin'ny tantara izany: ny an'ireo lehilahy sy vehivavy nohadinoin'ny repoblika sy ny ady an-trano, ny fifindra-monina tafavoaka velona ..., ary ny fiainana, raha fintinina, amin'ny zava-dehibe indrindra lafiny. manjavozavo sy mampiharihary.
Miaraka amin'ny prosa tsara tarehy, rakotry ny fiainana ny kabary malaza, ary ny filan'ny eritreritra tokana, eo anelanelan'ny tantara an-tsehatra sy ny lahatsoratra manaitaitra indrindra, Los Montes Antiguos dia liana fanadihadiana manohitra ny natiora voajanahary na nostalgia mamy. Manohitra ny angano momba ny firenena Edena, fa koa manohitra ny fanadinoana. Karazana georgia maoderina Virgilianana ampitan'ny fifanarahana izay mampitaha ny mahatoky amin'ny fifandanjana, miaraka amin'ny ahiahy, ny natiora ary ny tantara ihany.
Lavitra an'i egypta
Daty famoahana: 6/09/2021
Any Far from Egypt, André Aciman dia mahatadidy ny azy fahazaza ao Alexandria tsara tarehy sy kolontsaina ary ny zava-niainan'ny fianakaviany eccentric, jiosy Sephardic izay manana faka Tiorka sy Italiana, hatramin'ny nahatongavany tao an-tanàna tamin'ny fiandohan'ny taonjato ka hatramin'ny nandroahana azy tamin'ny XNUMX, fony mbola tanora ny mpanoratra. Foko iray misy tarehimarika toy ny karismatika satria tsy azo hamarinina: Dadatoa Vili, miaramila taloha mpiavonavona, mpitsikilo italianina ary anglisy mpitsikilo; ny renibe roa, "ny olo-masina" ary "ny andriambavy," mahay mifosa amin'ny fiteny enina, ao anatin'izany i Ladino; ny reniny, Gigi, vehivavy marenina mitondra sandry; na i Aunt Flora, mpitsoa-ponenana alemanina izay tsy mitsahatra mahatadidy fa ny jiosy dia hamoy ny fananany rehetra "farafaharatsiny indroa amin'ny fiainany."
Mampihomehy sy mahafinaritra, miaraka amin'ny akony Proustian marefo, ireo fahatsiarovana tsara tarehy ireo, namboarina tamin'ny fomban'ny sagas fianakaviana lehibe, dia nahavita nameno ny mpamaky tantara tsy hay hadinoina sy mpihetsiketsika.
Mpanoratra: Elizabeth von arnim
Daty famoahana: 8/09/2021
Ilay zazalahy kely sy tsy manan-tsiny Lucy Entwhistle dia namoy ny rainy vao nifanena tsy nahy tamin'i Everard Wemyss maty vady. Matotra, mihaino ary chivalrous i Wemyss miaro sy mitarika azy toy ny fanaon'ny rainy. Rehefa afaka andro vitsivitsy dia mangataka fanambadiana izy dia manaiky i Lucy, very hevitra ary tsy afa-manoatra. Na izany aza, misy aloka mitombo manaloka ny fahasambarany: ny matoatoa an'i Vera, vadin'i Wemyss voalohany, izay maty tamin'ny toe-javatra hafahafa.
Nahazo aingam-panahy avy amin'ny zavatra niainan'ny mpanoratra manokana ary navoaka tamin'ny fomba tsy fantatra anarana tamin'ny 1921, ity klasikin'ny fisalasalana ara-psikolojika ity, izay ohatra tsy azo iadian-kevitra an'i Rebecca, nataon'i Daphne du Maurier, no mamaky ny lafiny mampikorontan-tsaina sy maizina indrindra amin'ny fanambadiana.
Misy mahasarika ny sainao ve ny iray amin'ireo zava-baovao ireo? Raha toa ianao ka mijery andian-tantara bebe kokoa dia hahita ihany koa tamin'ny volana Aogositra tao amin'ny Netflix fiasa vaovao maro hankafizana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » ankehitriny » kolontsaina » Vaovao 5 momba ny literatiora izay antenainay hahazoanao tanana
Zavamaniry artifisialy: Hevitra handravahana azy ireo miaraka amin'ny tranonao